Arturo Vidal oo kadib imaatinkiisa kooxda Barcelona sheegay in Lionel Messi uu Yahay Kan ugu fiican aduunka – Gool FM
Arturo Vidal oo kadib imaatinkiisa kooxda Barcelona sheegay in Lionel Messi uu Yahay Kan ugu fiican aduunka
Dajiye August 6, 2018
(Barcelona) 06 Agoosto 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona Arturo Vidal ayaa ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan heshiiskii uu kaga soo dhaqaaqay kooxdiisii hore Bayern Munich, kadib markii uu yimid garoonka Cump Nou.
Barcelona ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Arturo Vidal, kadib markii uu si guul ah ka gudbay tijaabada caafimaadka saakay oo isniin ah, waxayna labada dhinac kala saxiixdeen heshiis saddex sano ah.
Arturo Vidal ayaa kala soo qeyb galay shirka jaraa’id ee loogu soo bandhigayay saxaafada madaxweyne ku xigeenka kooxda Barcelona Jordi Mestre iyo agaasimaha ciyaaraha kooxda Eric Abidal.
Vidal ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id la weydiiyay su’aal ku aadan kabtanka koowaad ee kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
“Waxaan u maleenayaa in imaatinkeyga kooxda Barcelona ay tahay talaabo aan horey u qaaday, waxaa jiro xidigaha ugu wanaagsan taariikhda kubada cagta, halkan waxaa ku sugan Lionel Messi”.
“Waan ku faraxsanahay inaan halkan la joogo Messi, waa ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda kubada cagta, waxaan doonayaa inaan la ciyaaro oo aan ku caawiyo garoonka dhexdiisa, sidoo kalena aan caawiyo ciyaartoyda oo dhan”.
Mina, Zaha, Maguire, Boateng, Traore & Wargeysyadu waxyaabihii ay maanta oo Isniin ah ka qoreen suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda
RASMI: Kooxda AC Milan oo saxaafada u soo bandhigtay halyaygeeda Paolo Maldini